Sambany tany Nepal no nahitana bibilava kukri mitsipitsipika manan-doha roa · Global Voices teny Malagasy
Antony maro no mahatonga ny fahaterahan'ny bibilava roa loha
Voadika ny 13 Mey 2020 5:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, русский, 日本語, English
Bibilava roa loha mahazatra. Sary avy amin'ny Hopitaly Kaligandaki sy Kamal Devkota. Nahazoana alàlana.
Efa tsy fahita firy ny dicephaly, ilay mahatonga ny bibilava ho teraka manan-doha roa. Saingy rehefa nahazo bibilava kukri mitsipitsipika manan-doha roa (Oligodon arnenis) ny mponina tao an-tanànakelin'ny distrikan'i Nawalpur any afovoan'i Nepal, tamin'ny volana Oktobra 2018 dia tsy nahafantatra izy ireo fa mbola tsy fahita mihitsy izany amin'io karazany io. Nanamarina ilay fahitana ny tatitra vao haingana navoaka tao amin'ny IRCF Journal tamin'ny volana Aprily 2020 .
Kukri mitsipitsipika manandoha roa. Sary nomen'i Kasara, Valan-javaboarin'i Chitwan, Nepal, tao amin'ny Kamal Devkota. Nahazoana alàlana.
Nalain'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny mponina ilay bibilava raha nentin'izy ireo tao Kathmandu renivohitra ary nomeny ny mpiambina ny valan-javaboarim-pirenena ao Chitwan izay nandefa ilay biby ho ao any amin'ny fonenany voajanahary.
Tsy fahatomombanam-piterahana antsoina hoe dicephaly
Nomena anarana araka ny nifiny maranitra sy fisaka ary miforitra izay ampiasain'izy ireo hanapahana ny atodin'ny biby mandady ny bibilava kukri mitsipitsipika. Hita any Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan, Bhutan ary Nepal izy ireo.
Teraka noho ny antony maro toy ny fizaran'ny tsimoka tsy feno, ny fitambaran'ny tsimoka roa, ny maripana, ny antony ara-tontolo iainana sy ny maro hafa ny bibilava roa loha. Mitranga amin'ny tranga iray isaky ny bibilava miisa 100.000 any an'ala ilay tsy fahatomombanana ary amin'ny iray amin'ireo bibilava miisa 10.000 izay nogiazana.
Samy manana ny atidohany ity bibilava ity noho ny fananany loha roa samihafa ary manana toetra manokana roa samihafa ihany koa fa ny lohan'ny iray no tena mitarika amin'ny ankapobeny. Kely dia kely ny taham-pahaveloman'ny bibilava “dicephalic” any an'ala satria mety hiady sakafo ireo loha roa ireo. Ary mahatonga azy tsy dia kinga loatra ny loha roa rehefa misambotra sakafo sy mora lasibatra ho an'ny biby mpihaza .
Bibilava roa loha
Antsoina hoe dicephaly
mitranga izany rehefa misaraka amin'ny dingana voalohany amin'ny fivoarana ny tsimoka, vokatry ny fiovan'ny hafanana tampoka,
ny fandotoana ny tontolo iainana, na ny fivadian'ny mitovy karazana.
tsy miaina ela ity zavaboary sampona ity.
Na dia hita matetika mandravaka ireo tempoly sy ny rano mikoriana ao amin'ny Lohasahan'i Kathmandu aza ny sary sy ny sary sokitra bibilava dia tranga tsy fahita firy ny bibilava roa loha. Ny kukri mitsipitsipika miraikitra misy loha roa no hany bibilava fahatelo manana loha kambana voarakitra tany Nepal. Mishra sy Shah no nitatitra ny fisian'ny bibilava dicephalic voalohany – maramara tanora (Fowlea piscator) tamin'ny 1983, raha bibilava iray mahazatra (Bungarus caeruleus) ny tranga faharoa – hita tamin'ny volana Mey 2018 tao amin'ny kaominin'i Munoti ao amin'ny Distrikan'i Nawalpur any afovoan'i Nepal. Io no nahitana ny dicephalisma voalohany tamin'ny bibilava tany Nepal ary nanaovan'ny Birao Mpikambana ao amin'ny Fikambanana Toxinology ao Nepal sy ny mpitantana ny Tetikasa “Save the Snakes” Kamal Devkota sy ny ekipany fanadihadiana.
Bibilava roa loha mahazatra. Sary nomen'ny hopitaly Kaligandaki sy Kamal Devkota. Nahazoana alàlana.
Niresaka tamin'ny Global Voices i Devkota momba ny tsy fahitana firy ny bibilava roa loha:
Tsy mora ny herping [mitady bibilava]. Nandritra ny ampolo taonany niasako no nahitako trangana bibilava mahaliana hafa kanefa tsy mahita izay tadiavinao mihitsy ianao matetika. Tahaka izany koa, hita tampoka ireo bibilava dicephalic ireo rehefa harahi-maso ny bibilava fa tsy amin'ny fanarahana ny fomba manokana.
Araka ny nolazain'i Devkota, karazana bibilava hatramin'ny 90 no hitan'ireo mpanoratra isan-karazany tao Nepal, ka ny 18 tamin'izany no heverina fa misy poizina. Na dia maro aza ny olona, ​​indrindra any amin'ny faritra iva any Nepal no matin'ny kaikitra bibilava isan-taona dia manana ny anjara toerany ao amin'ny tontolo iainana ny bibilava hoy hatrany i Devkota izay efa niasa tamin'ny fampitoniana ny adin'olombelona sy ny bibilava.
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fitazonana ny rojon-tsakafo [fitohizan-tsakafo] eo amin'ny natiora ny [bibilava]. Manampy amin'ny fampitomboana ny famokaran'ny tantsaha eny an-tsaha amin'ny fihinanana voalavo, sahona ary ny bibikely mpanimba voly hafa izy. Avy amin'ny poizina bibilava no ahafahantsika mamokatra fanafody maro isankarazany, anisan'izany ny hiadiana amin'ny kaikitry ny biby misy poizina.